A na -anabata ndị na -agụ dijitalụ na Malta maka ịnọ ogologo oge na ikike obibi obibi ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » A na -anabata ndị na -agụ dijitalụ na Malta maka ịnọ ogologo oge na ikike obibi obibi ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Foto site n'ikike MTA/Residency Malta
Malta, otu agwaetiti dị na Mediterenian, na-anabata ndị na-emegharị dijitalụ sitere na mba ndị na-abụghị mba Europe ikike ikike obibi ọhụrụ nke Nomad bu n'obi inye ụmụ amaala obodo nke atọ, gụnyere ndị si US na Canada, ohere ịrụ ọrụ na Malta site na nwa oge. . Atụmatụ a ga-emeghe naanị ndị na-achọ ọgwụ mgbochi COVID-19.
Emebere ikike ọhụrụ a iji nweta niche ọhụrụ gafere Europe, ebe ngagharị ụwa na -aga n'ihu na -arị elu ma na -ewu ewu.
A na -anabata ndị nwere ike ịrụ ọrụ na anya site na iji teknụzụ na ndị ọchụnta ego nwere mmasị maka njem na ịchọpụta obodo na ọdịbendị ọhụrụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ọrụ oge niile na-arụ ọrụ ugbu a site n'ụlọ na-enyocha ụzọ ijikọ ụzọ ọhụrụ a si arụ ọrụ na njem etiti oge na ogologo oge.
Malta enwelarị ọmarịcha obodo nomad dijitalụ, nke ihe mejupụtara ya bụ ụmụ amaala EU na -anaghị achọ ikike ọ bụla n'ihi nnwere onwe ngagharị. Ezubere ikike ọhụrụ ahụ ka ọ rute niche ọhụrụ gafere Europe, ebe ngagharị ụwa na-aga n'ihu na-arị elu ma na-ewu ewu, post-COVID.
Charles Mizzi, onye isi oche nke Residency Malta, ụlọ ọrụ gọọmentị na -ahụ maka ikike ahụ kwuru, "Malta awụliwo elu maka ịrị elu maka ọrụ ime obodo zuru ụwa ọnụ, ebe ọrịa na -agbanwe ihe mgbaru ọsọ na usoro ọhụrụ.
Maazị Mizzi gara n'ihu sị, "A na -anabata ndị nwere ike ịrụ ọrụ n'ime obodo site na iji teknụzụ na ndị ọchụnta ego nwere mmasị maka njem na ịchọpụta obodo na ọdịbendị ọhụrụ." “Ọ bụrụ na enwere nkuzi ọ bụla sitere na ọrịa na -efe efe bụ na ndị mmadụ dị njikere ịkwaga karịa ka ọ dị na mbụ. Malta bụ mba nwere ọtụtụ ihe ha ga -enye -site na ihu igwe na-atọ ụtọ ya na ndụ agwaetiti Mediterenian, ruo n'akụkọ ihe mere eme na ihe nketa ya nke ọma, ndị ọbịa na-ele ọbịa, akụrụngwa brọdband mara mma na ịnweta ọrụ nlekọta ahụike ụwa. N'ezie, ndị na -akwagharị akwagharị ga -enwe ahụ iru ala ozugbo ha rutere ebe a. Ebe Bekee bụ asụsụ gọọmentị na asụsụ maka ịzụ ahịa, iso ndị obodo na -ekwurịta okwu ga -abụ ọrụ dị mfe. ”
Ndị chọrọ ịrụ ọrụ na Malta, ruo nwa oge ruo otu afọ (emere maka mmeghari ohuru), ga -agba ọgwụ mgbochi, gosi na ha nwere ike rụọ ọrụ n'ime ime obodo, na -anọghị na ọnọdụ. Ha kwesịrị ịrụ ọrụ maka onye were ọrụ edebanyere na mpụga Malta, rụọ ọrụ azụmaahịa maka ụlọ ọrụ edebanyere na mpụga Malta, nke ha bụ ndị mmekọ ma ọ bụ ndị na -ekenye ihe; ma ọ bụ nye ndị ahịa ụlọ ọrụ ha na -adịgide adịgide nọ na mba ọzọ ọrụ efu ma ọ bụ ndụmọdụ. Usoro a na-aga n'ihu na Residency Malta na-ekwe nkwa ọrụ dị mma nke ndị nkwagharị na-atụ anya na-atụ anya ya.
Johann Buttigieg, onye isi ndị ọrụ nke Njem Nleta Malta kwuru, "Ndị mmadụ na -agagharị, Malta na -ejikwa usoro a zuru ụwa ọnụ eme ihe." “Ndị na -eme mkpagharị dijitalụ abụghịzi ihe na -ewu ewu n'ahịa ndị njem. Ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ oge niile na-arụ ọrụ ugbu a site na post-COVID na-enyocha ụzọ ijikọ ụzọ ọhụrụ a si arụ ọrụ na njem etiti oge na ogologo oge yana nchọpụta ọdịnala ndị ọzọ. Anyị kwenyere na usoro mgbanwe a maka ịrụ ọrụ n'ime ime ebe a ka ọ nọrọ, yabụ enweghị oge ka mma ugbu a maka ịdọta ndị ọchụnta ego chọrọ ịkwaga nwa oge yana udele ọdịbendị dijitalụ na -agagharị agagharị n'ụwa niile. Malta bụ ebe kacha mma, ebe nchekwa, agwaetiti na-asụ Bekee, agwaetiti Mediterenian. Nanị ngwa ọrụ achọrọ bụ ezigbo laptọọpụ iji jikọọ na akụrụngwa mgbasa ozi siri ike nke mba ahụ. ”
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa: Ndị America na ndị Canada ga -ejiriri ngwa Verifly
Gbasara nke ọma
VeriFLY mepụtara ma jikwaa ya site na nkwenye biometric na onye na -eweta azịza njirimara, Daon. VeriFLY na-enye ndị njem ụzọ dị nchebe ma dị mfe iji gosipụta ihe COVID-19 na-achọ. Mgbe ọ mepụtara profaịlụ echekwara na ngwa VeriFLY, Daon na -achọpụta na data onye ahịa dabara na ihe obodo chọrọ ma gosipụta ozi dị mfe ma ọ bụ ọdịda. Ozi a dị mfe na-eme ka nbanye na usoro nkwenye akwụkwọ tupu ọpụpụ. Ngwa ahụ na -enyekwa ndị njem ncheta mgbe windo njem ha na -abịa na njedebe ma ọ bụ ozugbo nzere ha gwụsịrị. Mụtakwuo site na ịga daon.com/verify.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ikike ikike obibi Nomad nke Malta na residencymalta.gov.mt/overview.
Agwaetiti anwụ na-achasi ike nke Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi nke ihe nketa ewuru emebi nke ọma, gụnyere njupụta kachasị nke saịtị UNESCO World Heritage saịtị na obodo ọ bụla. Valletta, nke ndị Knights dị mpako nke St. John wuru, bụ otu n'ime saịtị UNESCO na European Capital of Culture maka 2018. Ọchịchị Malta na okwute sitere na ntọala ụlọ ochie kacha ochie na-akwụghị ụgwọ na ụwa, ruo na otu n'ime Alaeze Ukwu Britain. usoro nchekwa dị egwu, yana gụnyere ngwakọta bara ụba nke ihe owuwu ụlọ, nke okpukpe na nke ndị agha site na mgbe ochie, nke etiti na mmalite nke oge a. Site na ihu igwe na -acha anwụ anwụ nke ukwuu, osimiri mara mma, ndụ abalị na -eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na -akpali mmasị, enwere nnukwu ihe ịhụ na ime. nletamalta.com
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Afrịka anabatala Costa Rica dị ka onye…
Ndị dike WTN sitere na mba 128 hụrụ Kenya n'anya: Njem ụwa…
Sistemu ọkụ okporo ụzọ kwụsịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị Briten si ...
Ebe njem ọkacha mmasị maka ndị America n'oge okpomọkụ a...
WestJet Group na-akpọsa onye isi oche na onye isi oge ọhụrụ